Kildare को शीर्ष लुकेको पैदल यात्रा र अन्वेषण गर्न को लागी ट्रेल्स - IntoKildare
अथि, क्लेन, Kildare, न्यूब्रिज, परिवार, जोडे, इतिहास प्रेमीहरू, साहसिक खोज्नेहरू, लुकेका रत्नहरू, आउटडोर उत्साहीहरू
क्षितिज मा अर्को "बाहिरी गर्मी" संग, त्यहाँ धेरै हिड्ने को रूप मा यस्तो कुनै चीज छैन। यदि तपाइँको नियमित हाइक ट्रेल्स साहसिक को एक स्पर्श हराइरहेको छ र तपाइँ केहि नयाँ खोजिरहनुभएको छ, अरु केहि नहेर्नुहोस् हामी तल Kildare को सबै भन्दा राम्रो राखिएको रहस्य को केहि साझा गर्न को लागी छौं।
हाम्रो उजागर गर्नुहोस् खोज्न को लागी शीर्ष पाँच स्थानहरु Kildare को लुकेको ट्रेल्स को अधिक अन्वेषण गर्न।
इतिहास र वास्तुकला शौकीनहरु को लागी: बैरो मार्ग
एक लुकेको रत्न को रूप मा यसको स्थिति को बावजूद, ब्यारो मार्ग देश मा सबैभन्दा सुन्दर हिड्ने ट्रेल्स को रूप मा एक प्रतिष्ठा छ। Lowtown, काउन्टी Kildare मा शुरू, पूरा निशान ११४km को लागी मा फैलिएको छ, यो मार्ग मा Kilkenny, लाओस र Carlow को भागहरु लाई कभर गर्दछ।
यात्रा को Kildare खुट्टा ऐतिहासिक शहरहरु र रोबर्टस्टाउन, Rathangan, Monasterevin र Athy, र एलेन को पहाड र Wicklow माउन्टेन को शानदार दृश्यहरु लाई प्रदान गर्दछ। धेरै ऐतिहासिक र वास्तुशिल्प बिन्दुहरु को साथ मार्ग मा शो मा पनी, ट्रेल आयरल्याण्ड को आकर्षक अतीत मा एक अद्वितीय अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दछ।
सबै परिवार को लागी: पोलार्डस्टाउन फेन प्रकृति रिजर्व
हामी को बारे मा gushing बिना Kildare मा सुन्दर प्राकृतिक ट्रेल्स उल्लेख गर्न सकेन पोलार्डस्टाउन फेन प्रकृति रिजर्व। Newbridge बाट 3km स्थित, यो संरक्षण को एक निर्दिष्ट क्षेत्र क्षारीय peatland को 220 हेक्टेयर मा आधारित छ। दुबै आयरल्याण्ड र पश्चिमी यूरोप मा एक दुर्लभता, यो अद्वितीय र विविध वनस्पति र जीव, जो आगन्तुकहरु अनुभव को दौरान को बारे मा जान्न सक्नुहुन्छ सुविधाहरु।
एक शान्त सेटिंग को दूरी मा एलेन को पहाड द्वारा अनदेखी, त्यहाँ मार्गहरु का एक श्रृंखला हो कि फेन भर मा रमाईलो गर्न सकिन्छ, उठाएको बोर्डवाक संगै एक रोचक looped पैदल संगै छन्।
जबकि कुकुरहरु स्वागत छ, उनीहरु सबै समय मा एक नेतृत्व मा राखिनु पर्छ र कुकुर-फोहोर झोलाहरु तपाइँ संग टाढा लैजानु पर्छ किनकि उनीहरु लाई साइट मा डिस्पोजल गर्न सकिदैन। बच्चाहरु लाई पनि यात्रा को दौरान पर्यवेक्षण गर्नु पर्छ, विशेष गरी जब बोर्डवाक मा।
यसको एक दिन बनाउन को लागी: Curragh मैदानहरु
Kildare टाउन बाट न्यूब्रिज सम्म 5,000 एकड मा फैलिएको, कुराग मैदान आयरल्याण्ड मा सबैभन्दा ठूलो unenclosed तल्लो घाँसे मैदान क्षेत्र हो, र एक कि इतिहास मा डराएको छ।
यो एक खुला मैदान को रूप मा, तपाइँ लगभग कुनै दिशा मा हिंड्न सक्नुहुन्छ। प्रारम्भिक शुरुवात गर्नेहरु लाई आयरल्याण्ड को केहि शीर्ष नस्ल घोडाहरु लाई सरपट मा सवार देखी खुशी हुनेछ, जबकि साँझ पैदल यात्रीहरु Kildare मा सबैभन्दा जादुई सूर्यास्तहरु को लागी निजी हुनेछन्।
Curragh यसको प्राकृतिक र सांस्कृतिक महत्व को मामला मा एक दुर्लभ रत्न हो, आगन्तुकहरु लाई छनौट को लागी बिगार्दा यो परिदृश्य र प्रस्ताव मा गतिविधिहरु को दायरा को लागी आउँछ। प्रसिद्ध Kildare स्थलचिन्ह पनि घरहरु Curragh रेसकोर्स, सैन्य संग्रहालय, Karibu पालतू फार्म र आयरल्याण्ड को सबैभन्दा पुरानो गोल्फ क्लब, रोयल Curragh गोल्फ क्लब।
यो सबै मा हराउन को लागी: Kildare भूलभुलैया
शानदार दृश्यहरु को बोनस संग अस्वीकार्य परिवार रमाईलो को लागी, Kildare भूलभुलैया यो गर्मी मा कुनै पनि आइतबार परिवार साहसिक को लागी एक जरूरी छ। १.५ एकड हेजिंगको साथ २ किलोमिटर भन्दा बढि पथहरु संग, आगन्तुकहरुलाई यो व्यापक भूलभुलैया को केन्द्र मा हेर्ने टावर को लागी आफ्नो बाटो खोज्न को लागी चुनौती दिईन्छ।
Kildare ग्रामीण इलाका को मनोरम दृश्यहरु को दृश्य टावर, जो पनी भूलभुलैया रूपरेखा को एक ओभरहेड झलक प्रदान गर्दछ बाट रमाईलो गर्न सकिन्छ। सेन्ट ब्रिगिड, Kildare को संरक्षक संत, डिजाइन को लागी प्रेरणा थियो, जो भूलभुलैया को चार quadrants भर मा स्थित सेन्ट ब्रिगिड क्रस शामिल छ।
एक काठ को भूलभुलैया, जिप तार, पागल गोल्फ र आक्रमण कोर्स को प्रस्ताव संगै, Kildare भूलभुलैया अर्को तहमा तपाइँको गर्मी को पैदल यात्रा लिनेछ!
प्रकृति र पशु प्रेमीहरु को लागी: Liffey पैदल - Clane र नदी Liffey परिपत्र
पक्षी र वन्यजन्तु हेर्न को लागी आदर्श, Clane र नदी Liffey परिपत्र प्रकृति संग जोड्न चाहनेहरु को लागी एक रोमाञ्चक अनुभव हो। Looped हिंड्ने ट्रेल 6km भन्दा मा कभर र मिंक, kingfishers, otters र धेरै धेरै सहित मार्ग मा धेरै रोचक पात्रहरु सुविधाहरु छन्।
क्लेन को व्यस्त शहर को छेउमा यसको स्थान को बावजुद, पैदल मार्ग केहि शान्ति र शान्त को लागी ती मानिसहरु को लागी एक निर्मल भाग्ने प्रदान गर्दछ। साहसिक कार्य को लागी संगै आफ्नो पोच ल्याउन चाहनेहरु लाई ध्यान दिनु पर्छ कि कुकुरहरु लाई सबै समय मा एक नेतृत्व मा राख्नु पर्छ।
परिवार संग महल स्पटि For को लागी: Mullaghreelan काठ
तपाइँको गर्मी को लागी एक जादुई स्थान, Mullaghreelan काठ, काउन्टी Kildare मा Kilkea नजिक, हराउन गाह्रो छ। २.३ किलोमिटर लूप ट्रेल एक पहाडको छेउछाउको सुरम्य स्थानमा सेट गरिएको छ, जसले सुन्दर किल्कीया महललाई हेरेको छ। इतिहास प्रेमीहरु यस पुरातन स्मारक संग जोडिएका धेरै कथाहरु मा रमाउनेछन्, जबकि उनीहरु को प्रकृति फिक्स को लागी उनीहरु यो वुडल्याण्ड एस्टेट भर मा बिस्तृत प्रशस्त जंगली फूलहरु मा भेट्टाउनेछन्।
एक परिवार मनपर्ने, यो एक सही गर्मी को निशान छ - तर यो आयरिश मौसम दुर्व्यवहार गर्दा एक सानो मैला प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले wellies नबिर्सनुहोस्!
अथिक्लेनKildareन्यूब्रिजपरिवारजोडेइतिहास प्रेमीहरूसाहसिक खोज्नेहरूलुकेका रत्नहरूआउटडोर उत्साहीहरू
केवल सात दिनमा इतिहासको ra००० वर्षसम्म उजाड
सम्पत्ति र ब्यवस्थाको समानान्तर कथाहरू अन्वेषण गर्नुहोस्
त्रासदी, विजय र धीरजको कथाहरू अनुभव गर्नुहोस्
यस प्रारम्भिक मसीही बास्न भर एक आध्यात्मिक ट्रेल लिनुहोस्
विचाहरू र सेन्ट-लादेन भूमिहरूमा विवाहहरूमा आश्चर्य